ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် အသက် ၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ၁ ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ...! - Myanmar Daily Time
HomeNEWSကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် အသက် ၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ၁ ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ…!
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဂုံးချိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စေပုပ်ကေကျေးရွာမှာ ဇူလိုင် ၉ ရက်က အသက်၎ နှစ်အရွယ် မိန်းကလးငယ်တဦးကို တရွာတည်းနေသူတဦးက အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ကျောက်ဖြူမြို့မရဲစခန်းက ပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့က အဆိုပါကလေးငယ်ရဲ့ မိဘတွေက လယ်တောထဲ ကန်းစွန်းရွက် သွားခူးဖို့ အတွက် ကလေးငယ်ကို အဒေါ်ဖြစ်သူထံ အပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်။
အဒေါ်ဖြစ်သူက ကလေးငယ်ကို အိမ်မှာထားခဲ့ပြီး ဂုံးချိန်ရွာဈေးသို့ ဈေးသွားဝယ်ပြီး ပြန်လာစဉ် အိမ်နီးချင်း ကိုညီညီဆိုသူက နေအိမ်အခန်းထဲက ထွက်လာတာကို တွေ့ရတာကြောင့် မေးမြန်းရာ ကလေးနဲ့လာရောက်ဆော့ ကစားတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကလေးငယ်ဟာ နေအိမ်ခန်းထဲကနေ ငိုယိုပြီး ထွက်လာတာကြောင့် အဒေါ်ဖြစ်သူက မိန်းကလေးငယ်ကို မေးမြန်းရာမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို သိရှိခဲ့တာပါ။ကလေးရဲ့မိန်းမအင်္ဂါကိုကြည့်ရာမှာ သွေးတွေကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်သူလို့ ယူဆရတဲ့ ကိုညီညီအား ကလေးငယ်ရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူက တရားလိုပြုလုပ်ကာ ရဲစခန်းမှာ တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကျော်ဇောက “သက်ငယ်မုဒိန်းမှု ဖြစ်တာပါ။
တရားခံကို ဖမ်းဆီးထားပါပြီ၊ အခုတော့ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊”လို့ ပြောပါတယ်။လတ်တလော အဓမ္မပြုကျင့်သူလို့ သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကိုညီညီကို ကျောက်ဖြူမြို့မရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ(၃၇၆) အရ အမှုဖွင့်လှစ်ကာ စစ်ဆေးနေပါတယ်။
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျဖွူမွို့နယျ ဂုံးခြိနျကြေးရှာအုပျစု၊ စပေုပျကကြေေးရှာမှာ ဇူလိုငျ ၉ ရကျက အသကျ၎ နှဈအရှယျ မိနျးကလးငယျတဦးကို တရှာတညျးနသေူတဦးက အဓမ်မပွုကငျြ့မှု ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ ကြောကျဖွူမွို့မရဲစခနျးက ပွောပါတယျ။အခငျးဖွဈတဲ့နကေ့ အဆိုပါကလေးငယျရဲ့ မိဘတှကေ လယျတောထဲ ကနျးစှနျးရှကျ သှားခူးဖို့ အတှကျ ကလေးငယျကို အဒျေါဖွဈသူထံ အပျနှံထားခဲ့ပါတယျ။
အဒျေါဖွဈသူက ကလေးငယျကို အိမျမှာထားခဲ့ပွီး ဂုံးခြိနျရှာဈေးသို့ ဈေးသှားဝယျပွီး ပွနျလာစဉျ အိမျနီးခငျြး ကိုညီညီဆိုသူက နအေိမျအခနျးထဲက ထှကျလာတာကို တှရေ့တာကွောငျ့ မေးမွနျးရာ ကလေးနဲ့လာရောကျဆော့ ကစားတာ ဖွဈကွောငျး ပွောဆို ထှကျသှားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အဲဒီနောကျ ကလေးငယျဟာ နအေိမျခနျးထဲကနေ ငိုယိုပွီး ထှကျလာတာကွောငျ့ အဒျေါဖွဈသူက မိနျးကလေးငယျကို မေးမွနျးရာမှာ အဓမ်မပွုကငျြ့ခံခဲ့ရတယျဆိုတာကို သိရှိခဲ့တာပါ။ကလေးရဲ့မိနျးမအင်ျဂါကိုကွညျ့ရာမှာ သှေးတှကေိုတှရှေိ့ရတဲ့အတှကျ ကလေးကို အဓမ်မပွုကငျြ့သူလို့ ယူဆရတဲ့ ကိုညီညီအား ကလေးငယျရဲ့ အဒျေါဖွဈသူက တရားလိုပွုလုပျကာ ရဲစခနျးမှာ တိုငျတနျးခဲ့ပါတယျ။ကြောကျဖွူမွို့မရဲစခနျးမှူး ဒုရဲမှူးကြျောဇောက “သကျငယျမုဒိနျးမှု ဖွဈတာပါ။
တရားခံကို ဖမျးဆီးထားပါပွီ၊ အခုတော့ စဈဆေး ဆောငျရှကျနပေါတယျ၊”လို့ ပွောပါတယျ။လတျတလော အဓမ်မပွုကငျြ့သူလို့ သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ကိုညီညီကို ကြောကျဖွူမွို့မရဲစခနျးက ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ(၃၇၆) အရ အမှုဖှငျ့လှဈကာ စဈဆေးနပေါတယျ။
တစ်ခါ ကြုံဖူးရုံ ဖြင့် တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလွန်းတဲ့ ဘီလူးစီးခြင်း အကြောင်း
This Year : 165100
Total Users : 190985
Total views : 577084